Ny 16 fampiharana Harry Potter tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ny fampiharana Harry Potter 16 tsara indrindra ho an'ny Android
Ireo no ilay fampiharana Harry Potter tsara indrindra ananantsika amin'ny Android ary hahafahanao maneho ny toetran'izy ireo, mamantatra hoe trano iza ianao, na manamboara tsangambato majika amin'ny baikon'ny «Lumos».
Andao handeha miaraka amin'ity andiany ity fampiharana amin'ny karazany rehetra ho an'ireo mankafy an'io saga io izay nahatonga anay hamakivaky tantara an-tsehatra majika maro nandritra ny taona maro niaraka tamin'ny sarimihetsika nataony tao amin'ny sinema sy tamin'ny boky. Kitiho ny fampiharana sy ny lalao izao.
1 Harry Potter: Mistery Hogwarts
2 Spelly - ozofa Harry Potter sy quiz!
3 Iza amin'ireo ny tranonao?
5 9 3/4 Amino ho an'i Harry Potter amin'ny teny Espaniola
8 Diary Potter's
9 Reny: Audiobooks Harry Potter
10 Mianara manao sary an'i Harry
11 Satroka fanasoketana
12 Manoroka an'i Crucio Harry manambady
13 Inona no tianao? Harry Potter
14 WAStickers ho an'i HarryPotter
15 LEGO Harry Potter: Taona 5-7
16 Quiz Harry Potter Wizard: U8Q
Ny lalao ofisialy Harry Potter ho an'ny Android izay miaraka amin'ny hevitra maherin'ny 2 tapitrisa ao amin'ny Play Store nanao toerana manokana teo amin'ireo mpanaraka ilay saga izy io. Ianao dia ho afaka hahita ody majika, afangaroy potion mahery, ary manaova elanelana eo amin'ny mpamosavy sy mpamosavy amin'ity lalao ity amin'ny tsara indrindra ananantsika an'i Harry Potter. Nahazo maimaimpoana tamin'io freemium io izahay.
Spelly - ozofa Harry Potter sy quiz!
Ary mandehana amin'ny lalao mankany amin'ny fampiharana iray izay miavaka amin'ny alàlan'ny famoahana ny ody Harry Potter rehetra mba hahafahantsika mahazo azy ireo. eo ny asany dia ny fahaizana manasokajy ody ary mamerina azy ireo aza amin'ny alàlan'ny fikororohana ny finday. Rindrambaiko iray izay hahafantaran'ny mahatoky indrindra amin'ny saga ny fomba lanjan'izy ireo ny lanjany noho ny atiny lehibe atolotray avy amin'ny fampiharana maimaim-poana ho an'ny Android.
Iza amin'ireo ny tranonao?
Ity iray ity fampiharana dia quiz na quiz fotsiny, iza no hametraka fanontaniana amintsika mba hahafahantsika mamaly azy ireo amin'ny fomba marina araka izay tratra. Raha manao ny marina isika dia hampahafantatra anay ny trano Hogwarts misy antsika, noho izany dia hazavao manokana ny valiny mba hahafantaranay raha toa ianao ka Gryffindor toa an'i Potter, na Slytherin toa an'i Malfoy, na angamba Hufflepuff na Ravenclaw ianao . Fampiharana tena mahaliana amin'ny Espaniôla hahafantarana bebe kokoa momba antsika sy ny fomba hidirantsika amin'izao rehetra izao noforonin'i JK Rowling.
Fampiharana mahaliana kokoa noho ny fanekena feo mba hahafahantsika manao hiteraka ny ody Lumos miaraka amin'ireo wands 5 natolotra. Fampiharana iray izay mitaky ny ananantsika Internet mba hiasan'ny fanekena ny feo mba hamoahana ody miaraka amin'i Lumos na hamonoana ny tongony miaraka amin'i Lumos. Fampiharana maimaim-poana amin'ity lisitr'ireo fampiharana Harry Potter tsara indrindra ity.
9 3/4 Amino ho an'i Harry Potter amin'ny teny Espaniola
Miatrika tambajotra sosialy natokana ho an'izao rehetra izao Harry Potter izahay ary amin'ny Espaniôla izany mba hahafahanao mihaona amin'ireo mpankafy toa anao mitady hizara fahalalana, antsipiriany momba ny boky tiany indrindra na ilay sary namboariny taorian'ny nahitany ny sarimihetsika iray fantany indrindra. Io dia ahafahanao miresaka amin'ny mpankafy hafa, mifidy ny boky na sarimihetsika tianao indrindra, mizara vaovao momba ilay saga, mamaky na mandefa zavakanto mpankafy nataonao ho anao mihitsy aza, na mandray anjara amin'ny rakipahalalana momba ny saga Hogwarts eran-tany.
Fampiharana iray izay dia natokana ho lalao kely 10 ka fantatsika izay trano misy antsika na mamorona avatar an'izao rehetra izao fotsiny avy amin'i Harry Potter. Rindrambaiko mahaliana ho an'ny mpanaraka rehetra ary manatrika hetsika tsy lavitra eo akaikinay izay hihaonantsika amin'ny mpanao majia toa anay ary mizara fahalalana. Tsy fampiharana ho an'ny ankizy kely ao an-trano izy io satria mampitandrina amin'ny pejy mitovy amin'ilay fampiharana ao amin'ny Play Store izy ireo, fa natao ho an'ireo mpankafy an'i Harry Potter olon-dehibe.
Lalao Niantic, mpamorona ny Pokémon GO, Ny lalao zava-misy nampitomboina nifototra tamin'izao rehetra izao noforonin'i JK Rowling dia navoaka kely fotsiny. Araho ireo mekanika mitovy amin'izany, fa ny dikan'ny hoe afaka mizaha ny tanànantsika na ny tanànantsika mba hiatrehana ireo karazan-doza rehetra. Misarika be dia be avy amin'ny GPS sy ny fakan-tsary izany, ka omena bateria ivelany ianao mba hahafahanao mandany ora maro hifalifaly miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminao na namanao izay nihaonanao tamina fampiharana hafa tamin'ity lisitr'ireo fampiharana Harry Potter ity. Ny iray amin'ireo zava-dehibe ao amin'ilay lisitra hiditra ao ary ao anatin'ny fotoana fohy dia afaka namoaka hevitra 300.000 tao amin'ny Play Store.
Tsy miresaka diary akory isika, fa kosa amin'ny iray izay mifanerasera amintsika ary tokony hialantsika amin'ny fampiasana azy io ho toy ny diary mahazatra. Io no mampiavaka azy tsara indrindra sy ny antony mampiavaka azy. Rehefa miteny hoe mifanerasera dia izay afaka manontany anao momba an'i Quidditch izahay, Hogwarts sy lafiny hafa amin'ilay saga. Fampiharana tena manokana sy mahaliana ananantsika maimaimpoana amin'ny Play Store. Ka eo anoloan'ny diary majika nataon'i Potter izahay miandry anao hangataka na inona na inona. Manana izany amin'ny teny espaniola ianao, koa aza adino ny fotoana nifanarahana.
Reny: Audiobooks Harry Potter
Leonor Watling sy Amazon dia nanao fifanarahana hamoaka audiobooks miaraka amin'ny feon'ny mpilalao sarimihetsika ary manolotra ny sasany amin'ireo boky malaza indrindra toa an'i izy ireo dia Harry Potter ary ilay voafonja ao Hazkaban, sy ny maro hafa izay navoaka tato anatin'ny volana vitsivitsy. Izy io dia atiny vaovao sy tena manokana satria hanao izany avelao hilalao ny audiobooks rehefa mandeha miasa ao anaty fiara ianao na ihany amin'ny findainao. Audiobook sasany anananao maimaim-poana mandritra ny 1 volana mba hahafahanao manandrana ny serivisy Amazon vaovao, ary avy eo mandroso amin'ny famandrihana isam-bolana. Iray amin'ireo fifanarahana tsara indrindra anananay amin'ity lisitra ity ho an'ireo mpankafy ny tontolon'i Hogwarts.
Azo henoina - Audiobooks sy Podcast am-boalohany
Mianara manao sary an'i Harry
Fampiharana voatokana hianarana ny fanaovana sary Harry Potter sy ireo singa na zavatra rehetra mifandraika amin'ilay saga. Ny iray amin'ireo fisaorana ilaina amin'ireo takelaka takelaka mamela antsika hanao sary saika mitovy amin'ny maodely napetrak'izy ireo taminay. Manana ambaratongam-pahasarotana maromaro izy ireo ary koa fampianarana ho anay hianarantsika haingana. Ny iray amin'ireo hatsarany dia ny ivelan'ny Internet.
Developer: Lalao VLK
Fampiharana iray hafa hahafantarana hoe trano iza no misy antsika ao amin'ilay saga ary amin'ny alàlan'ny fangatahana fangatahana dia afaka manolotra vaovao ilaina izahay hamoronana ilay mombamomba ny iray amin'ireo trano. Afaka mahazo teny nalaina isan'andro isika ary mahazo fanamarinana aza maromaro miaraka amina lohahevitra manokana ary mahatsapa ho ao an-trano amin'ity fampiharana tonga lafatra ity ho an'ny mpankafy Harry Potter. Angamba ianao manana ny fahasembanan'ilay fiteny, fa tsara kokoa ny mamaky azy io ary manaporofo ireo hatsarany sy tombony azo avy amin'izany. Maimaimpoana sao diso anjara ianao.
Manoroka an'i Crucio Harry manambady
Lalao fanta-daza amin'ny mekanika ary mitondra antsika any amin'ny tontolo Harry Potter hizaha raha hanoroka isika, hanambady ve isika sa hanao Ozona nataon'i Crucio. Iray amin'ireo fampiharana manokana amin'ity lisitra ity izay miavaka amin'ny ambiny. Efa nieritreritra ve ianao hoe iza no hanoroka an'i Hogwarts? Hermione sa Luna? Ahoana ny manambady olona? Miaraka amin'i Sirius sa amin'i Lupine? Amin'izay, ireo fanontaniana nangonina avy tamin'ny pejinao ireo dia azonay atao tsara ny manazava ny momba an'ity fampiharana maimaimpoana ity hahafahanao mametraka azy amin'ny findainao izao.
Inona no tianao? Harry Potter
Tena mahaliana ny fampiharana iray satria fanontaniana iray izay anontaniana antsika zavatra mahaliana momba an'i Harry Potter ary omena valiny roa isika. Fanontaniana toy ny efa mba nieritreritra an'iza ianao fa hiaraka amin'ny Hogwarts? Hermione sa Luna? Miady amin'i Sirius sa i Lupine? Aza adino izany satria hametraka anao ao anatin'ny fotoana iray monja hiadiana amin'ny sabatra ianao na ny rindrina noho ny hafetsen'ny fanontaniany. Rindrambaiko maimaimpoana hafa indray ho an'ny findainao.
WAStickers ho an'i HarryPotter
Ahoana raha mitady pataloha Harry Potter tsara indrindra ianao ho an'ny findainao Android hanentanana ireo chat azonao avy amin'ny fampiharana toa ny WhatsApp, ity dia iray amin'ireo fampiharana ilaina. Miaraka amin'ny lohahevitra maro karazana avy amin'ilay saga noforonin'i JK Rowling, dia lasa iray amin'ireo tena ilaina izany raha ao amin'ny vondrona WhatsApp mifandraika amin'ity tontolo ity isika.
Un lalao ho an'ny ankizy kely ao an-trano ary tsy maintsy aloanao izany satria premium izany. Izy ireo dia ho afaka mifehy ny sasany amin'ireo tarehin-tsoratra miaraka amin'ny tongony mba hanatanterahana ny ody mazika amin'ny lalao LEGO izay tsy ampy amin'ny hatsarana sary sy teknika; toy ny ireo lalao mitovy amin'ny LEGO ho an'ny Android.
Ary vita isika ity lisitr'ireo fampiharana Harry Potter tsara indrindra ity miaraka amin'ny lalao fanontaniana izay ananantsika an'arivony maro hanehoana ny fahalalantsika ireo boky nosoratan'i JK Rowling. Tsy misy amin'ny teny Espaniôla izy io, fa ny tsy fananantsika zavatra mitovy amin'ny fiteninay dia mahatonga azy io ho zavatra manokana ho an'ireo izay te hampanan-karena ny tenany amin'ity tontolo ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana Harry Potter 16 tsara indrindra ho an'ny Android
Ny Cubot KingKong 5 Pro dia natomboka tamin'ny tolotra 3 andro tamin'ny 44% tamin'ny € 121,62